बदमासी कसको ? व्यवसायीको दवावमा हुन सकेन ऐन संशोधन - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
बदमासी कसको ? व्यवसायीको दवावमा हुन सकेन ऐन संशोधन
काठमाडौं । व्यवसायीहरुले वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन नगर्न दवाव दिएपछि ऐनको मस्यौदा कानुन मन्त्रालयबाट पुनः श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमै फिर्ता भएको छ। २०६४ मा तयार गरिएको उक्त ऐन कामदारमुखी नभएको भन्दै संशोधनका लागि मस्यौदा तयार हुँदै आए पनि कहिले श्रमको कानुन शाखामा त कहिले कानुन मन्त्रालयमा घुम्ने गरेको छ।
कामदार र उनीहरूको हकहितमा काम गर्ने निकायको निरन्तर दबाबपछि श्रम मन्त्रालयले संशोधन प्रक्रियाका लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाएको मस्यौदा केही दिनअघि श्रममै फिर्ता भएपछि आगामी प्रक्रियाबारे अन्योल उत्पन्न भएको छ।
श्रमविज्ञले वैदेशिक रोजगारी मर्यादित, व्यवस्थित, पारदर्शी र कामदारमैत्री हुन नसक्नुको कारणमा उक्त ऐनलाई लिँदै आएका छन्। ‘उक्त ऐनको प्रस्तावनामै वैदेशिक रोजगारको व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्ने उल्लेख छ,’ ऐन नियालिरहेका अधिवक्ता वीरबलकाजी राईले भने, ‘जसले गर्दा ऐन व्यवसायीको पक्षमा देखिँदै आएको छ। ऐन बनेदेखि नै संशोधनको आवाज उठे पनि अहिलेसम्म उपलब्धि केही हुन सकेको छैन।’
संशोधन आवश्यक ठान्नेहरूले म्यानपावर व्यवसायीको प्रभावले ऐन संशोधन हुन नसकेको आरोप लगाउँदै आएका छन्। ऐन संशोधन हुनुपर्ने आवाज पटकपटक उठेपछि मन्त्रालयले पछिल्लो दुई वर्षमा दुईपटक मस्यौदासमेत तयार पारिसकेको छ।
कानुन मन्त्रालयले अस्वीकृत गरेको पछिल्लो मस्यौदामा म्यानपावर सञ्चालकको धरौटी ३० लाख रुपैयाँबाट वृद्धि गरेर एक करोड पुर्याइएको छ।
त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ठगीमा परेका कामदारलाई सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट क्षतिपूर्ति दिलाइने प्रस्ताव गरिएको छ। विद्यमान ऐनमा भने वैदेशिक रोजगारीको क्रममा पीडित भएकाको उजुरीको छिनोफानो वैदेशिक विभागले मात्र गर्न सक्ने उल्लेख छ।
विभाग राजधानीमा सीमित भएकाले दुर्गम गाउँमा पीडित पनि न्याय प्राप्तिका लागि काठमाडौं धाउनुपर्ने बाध्यता छ। प्रायः ठग्ने र ठगिने व्यक्ति फरकफरक जिल्लाका हुने र न्याय दिने निकाय काठमाडौंमा हुँदा अधिकांश पीडितले न्याय पाउन नसकेको गुनासो छ।
वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्लेले आफू बोर्डमा आएको बेलादेखि नै ऐन संशोधनको चर्चा सुनेको बताए।
‘मैले बोर्डमा नियुक्ति लिँदा देखि नै ऐन संशोधनको चर्चा सुनेको हुँ,’ उनले भने, ‘मेरो चारवर्षे कार्यकाल पूरा हुन एक महिना बाँकी छँदा पनि सोही कुरा सुन्दै आएको छु।’ ऐन निर्माणका बेला राम्रो भए पनि पछिल्लो समयका लागि भने अपर्याप्त रहेको उनले बताए। (नागरिक दैनिक)